Oké ifufe mmiri na Dubai | Netwọk Mgbasa Ozi
Dubai, na United Arab Emirates, aghọwo, n'ihi ụlọ ya ndị okomoko, otu n'ime isi ebe ndị njem na Middle East. Agbanyeghị, n'agbanyeghị na ọ bụ obodo ọgbara ọhụụ nke ihe owuwu ya na-e thatomi nke isi obodo ọdịda anyanwụ, anyị agaghị echezọ na ọ dị n'etiti ọzara, yabụ oké ifufe ha bụ ihe a gụrụ.
A na-eji ndị bi n'obodo ahụ mara ya ugbu a, mana maka ndị njem nleta oge mbụ Dubai ọ pụrụ ịbụ nnọọ iru ala. Ihe oyiyi ahụ dị egwu ma otu ga - asị na ọ gachara aja aja e liela obodo ya.
Ma ọ dịghị ihe karịrị eziokwu, ebe ọ bụ na ewezuga ụfọdụ nhụjuanya n'oge oge oke ifufe ahụ na-adịgide, ihe ịtụnanya a anaghị anọchite anya ihe egwu ọ bụla maka iguzosi ike n'ezi ihe nke ndị mmadụ. N'ezie, ọ dị mma izere ịnọ n'okporo ámá n'otu oge ọ gwụla ma ị na-eyi ugogbe nchekwa, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ kachasị ike. N'okpuru usoro ndị a, anyị nwere ike ịhụ vidiyo mara mma nke Dubai na-elo n'ụzọ nkịtị aja aja:
Ozi ndị ọzọ - AEMET rụkọtara ọrụ na ntinye nke photomita ọhụrụ na Morocco
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Oké ifufe mmiri na Dubai